အကောင့်မျိုးစုံလုပ်ပါ - Android အတွက် Infinite Parallel Clone Pro APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အကွိမျမြားစှာ Accounts ကိုလုပျဆောငျ - Infinite စင်ပြိုင် Clone Pro ကို
အကွိမျမြားစှာ Accounts ကိုလုပျဆောငျ - Infinite စင်ပြိုင် Clone Pro ကို APK ကို
န့်အသတ်အပြိုင်အာကာသအတွင်း app ကို clone မှထောကျပံ့ပေး။ မျိုးစုံအကောင့်အစာရှောင်ခြင်း app ကို cloner! dual-အာကာသထက်ပိုငျသညျ WhatsApp ကို, Messenger ကို, Facebook နှင့်အခြားလူမှုရေးသို့မဟုတ်ဂိမ်း application များအတွက်န့်အသတ်ပေါင်းစုံအကောင့်ဖန်တီး login နိုင်ပါတယ်။
Login နှင့်2ချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျကို application များအတွက်အကောင့်ထက်ပို run, မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်တဦးတည်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့် chat!
မျိုးစုံအကောင့်နှင့်အတူဂိမ်း Play နှင့် dual-function ကိုများနှင့်အတွေ့အကြုံများရရှိရန်တစ်ပြိုင်နက်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုစောင့်! မျိုးစုံပျော်စရာပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
မြစ်ကျောက်ခေတ် Tech မှစွမ်းအားဖြင့်အကွိမျမြားစှာသလား, အများဆုံးအလေးချိန်-အလင်းနှင့်အစွမ်းထက်ကိုယ်ပွားအင်ဂျင်နှင့်အတူ, သင်သည်အခြားကွဲကွာအပြိုင်အာကာသသို့သင့်ရဲ့ app ကို clone ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အကွိမျမြားစှာသငျပုံတူမျိုးပွား app ရဲ့အသိပေးချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့, နှင့် Clone app ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သီးသန့်လုံခြုံရေး Locker function ကိုပေးနိုငျပါစေနဲ့။ ဒါဟာအစ Clone app ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်နှင့်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုရောက်ရှိဖို့ Lite ကို Mode ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။
အကွိမျမြားစှာသလားအများဆုံးချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျကို apps များ, ဂိမ်း App များနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက် apps များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ Google ကဝန်ဆောင်မှု Play ထောက်ခံနေကြပြီး, သင်သည်သင်၏ Clone အတွက်သင်၏ Google Play စဂိမ်းများသို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။
★သင့်ရဲ့မျိုးစုံစာပို့ခြင်း, ဂိမ်းနှင့်လူမှုရေး apps များအတွက် Log
• Balance သင်၏အသက်တာများအကြားနှင့်မျိုးစုံအကောင့်နဲ့အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
• Clone နှင့်မူရင်း apps တွေရဲ့ဒေတာများကွဲကွာနေကြ
★ရုံတကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူ dual-အကောင့်များအကြားအစာရှောင်ခြင်း Switch
•တစ်ပြိုင်တည်းအကောင့်နှစ်ခု Run နှင့်ကိုယ်ပွား tags များနှင့်အတူ icon တွေကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးအာဏာနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထိရောက်မှုတို့အတွက် Lite ကို Mode ကို★
★သတိပေးချက် Clone ၏အသိပေးချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ setting
•ခွင့်ပြုချက်များ: အကွိမျမြားစှာ app ကိုကိုယ်နှိုက်ကအနည်းငယ်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ပေမယ့်ကိုယ်ပွား apps တွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးအများအပြားခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်အကွိမျမြားစှာလိုအပျခလုပ်ပါပါစေနဲ့။ Clone ပြေးလာသောအခါ mis-function ကိုသို့မဟုတ်ပျက်ကျမှုရှောင်ရှားရန်အကွိမျမြားစှာသလားအဲဒီခွင့်ပြုချက်ပေးရန် ကျေးဇူးပြု.
•စားသုံးမှု: သူ့ဟာသူအကွိမျမြားစှာတကယ်အထဲမှာ running app များအားဖြင့်စားသုံးနေကြရသောအားဖြင့်အလွန်အကျွံမှတ်ဉာဏ်, ဘက်ထရီများနှင့်ဒေတာများတက်ယူမထားဘူးပါနဲ့။
•အသိပေးချက်များ: သင်၏ system ကိုအကြောင်းကြားစာ setting တွင် whitelist ထဲသို့ Do အကွိမျမြားစှာကိုထည့်သွင်းပါ။
မည်သည့်ပြဿနာမျှအဘို့, Do အကွိမျမြားစှာအတှငျး '' တုံ့ပြန်ချက် '' အင်္ဂါရပ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့: riverstone.tech@gmail.com
Clan ၏တိုက်ပွဲများကို fix, တော်ဝင်နှင့်အချို့သောဂိမ်းမျိုးစုံအကောင့်ပြဿနာထိပ်တိုက်တွေ့
Whatsapp နှင့်အချို့သောလူမှုရေး app ကိုပြဿနာ fix
အချို့သောတိကျတဲ့ဗားရှင်းအပေါ်အလုပ်မဖြစ်ဘူး Google ကဝန်ဆောင်မှုကို fix
အကွိမျမြားစှာ Accounts ကိုလုပျဆောငျ - Infinite စင်ပြိုင် Clone Pro ကို
မြစ်ကျောက်ခေတ် Tech မှ